Kooxaha Chelsea iyo Everton oo Guul Gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxaha Chelsea iyo Everton oo Guul Gaaray “SAWIRRO”
Kooxda Hull City ayaa waxaa garoonkeeda Kingston Communications Stadium 2-3 uga badiyay kooxda Chelsea.
Kooxda Chelsea ayaa bilowgii ciyaarta dhalisay labo gool oo deg deg ah,waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Edin Hazard iyo Diego Costa.
Kooxda Hull City ayaa ku jawaabaty labo gool oo bareejo ah,waxaana daqiiqadii 27-aad iyo 28-aad u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Ahmed El Mohamady iyo Abel Hernandez,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Loic Remy ayaa daqiiqadii 77-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Chelsea.
Kooxda Chelsea ayaa horyaalka ingiriiska ku hogaamineyso 67-dhibcood,halka kooxda Hull City ay horyaalka uga jirto kaalinta 15-aad,iyadoo leh 28-dhibcood.
Kooxda Queens Park Rangers ayaa waxaa garoonkeeda Loftus Road 1-2 uga badiyay kooxda Everton.
Kooxda Everton ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 18-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Seamus Coleman,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Eduardo Vargas ayaa daqiiqadii 65-aad ee ciyaarta goolka bareejada u dhaliay kooxda QPR.
Ciyaaryahan Aaron Lennon ayaa daqiiqadii 77-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Everton.
Kooxda Everton ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 13-aad,waxana ay leedahay 34-dhibcood,halka kooxda Queens Park Rangers ay horyaalka ugu hooseeyso.